မေဆွိ - ဝီကီပီးဒီးယား
မေဆွိ (၁၉၆၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃)၏ အမည်ရင်းမှာ ဆွေအေးမြင့် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတဝန်း ကျော်ကြားသည့် တေးသံရှင်နှင့် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ မိခင် ဖြစ်သူမှာ အကယ်ဒမီ များရှင် စည်သူဘွဲ့ရဒေါ်မြင့်မြင့်ခင် ဖြစ်ပြီး မွေးချင်း (၅)ယောက် အနက် လေးယောက်မြောက် သမီး ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ခေတ်ပေါ် တေးဂီတလောကတွင် အအောင်မြင်ဆုံး အမျိုးသမီး တေးသံရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမ၏ ကော်ပီသီချင်းများအပြင် မြန်မာဟန် ရိုးရာသီချင်းများလည်း လူကြိုက်များသည်။ မေဆွိသည် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များတွင် နာမည်ကျော် တေးရေးဆရာ သုခမိန်လှိုင် ရေးသားဖန်တီးသည့် ပန်းသီးသီချင်းများ ကော်ပီစီးရီးဖြင့် လူသိများလာသည်။ မေဆွိသည် စိုင်းထီးဆိုင်အပါအဝင် အမျိုးသား တေးသံရှင်များ၏ သီချင်းများကို ပြန်ဆိုလေ့ရှိသည့်အပြင် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်များကိုလည်း ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ကိုင်ဇာနှင့် သီဆိုသည့် စုံတွဲသီချင်းများမှာလည်း အထူးအောင်မြင်သည်။ ကိုင်ဇာနှင့်သီဆိုခဲ့သော အနမ်းပန်းသီချင်းသည် အင်မတန်မှအောင်မြင်ခဲ့သည်။
(၁၉၆၂-0၂-၁၃) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၁၉၆၂ (အသက် ၅၉)
ဦးခင်မောင်ညွန့် + ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်
အောင်မြင်မှု အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိသည့် ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်များတွင် မေဆွိသည် နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်များဖြစ်သည့် ပြေငြိမ်း၊ ကျော်သူ တို့နှင့်အတူ ရုပ်ရှင်များလည်း ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်များတွင် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းကို ရပ်နားလိုက်ပြီး ဂီတလုပ်ငန်းကို အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့ခေတ်ပေါ်ဂီတ ရေစီးကြောင်းသည် ခေတ်နှင့်အလိုက် ရော့ခ် (Rock)၊ ပေါ့ပ် (Pop)၊ ဟဲဗီးမက်တယ် (heavy metal) စသည့် ဂီတဟန်များမှ အာရ်အင်ဘီ (R&B)၊ တက္ကနို (techno)၊ ဟစ်ပ်ဟော့ပ် (Hip-hop) စသည့် သဏ္ဌာန်သို့ ကူးပြောင်းလာသော်လည်း သူမသည် ကိုယ်ပိုင်ဟန်ဖြင့် တေးစီးရီးများကို ဆက်လက်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
မေဆွိသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် နယူးယောက်မြို့မှ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာလူမျိုး ဦးဇော်ဝင်းနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးနောက် ဂီတလောကနှင့်ရော အမိမြေကိုပါ ခွဲခွာခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ခင်ပွန်းနှင့်အတူ ဒယ်လာဝဲတွင် နေထိုင်သည်။ ယခုအခါသူမသည် ကမ္ဘာတဝန်းရှိ မြန်မာပရိသတ်များအတွက် သီဆိုဖျော်ဖြေနေဆဲ ဖြစ်သည်။ Myanmar Idol ၏ ဒိုင် အဟောင်းတစ်ယောက်ပင်ဖြစ်ပြီး ယခုထိ အောင်မြင်ကျော်ကြား လူကြိုက်များသော တေးသံရှင် တစ်ဦး ပင်ဖြစ်သည်။
မေဆွိသည် သူမ၏ ဂီတသက်တမ်းတလျှောက် ဂီတဟန် အမျိုးမျိုးရှိသည့် သီချင်းပေါင်း ရာကျော်၊ တစ်ကိုယ်တော် စီးရီးပေါင်း ၁၂၀ ကျော်ကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၁၀ နှစ်ကျော် နားခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စီးရီးအသစ်တစ်ခုကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ပန်းသီးသီချင်းများ ၇ (၁၉၈၇)
နှလုံးသားထဲက စိုင်းထီးဆိုင် ၁ (၁၉၈၅)
နှလုံးသားထဲက စိုင်းထီးဆိုင် ၂ (၁၉၈၅)
ဘိုင်စကုတ်ထဲက ဆွိ (၁၉၈၅)
ဆူး ဆွိ ဒိုင်ယာရီ
ရင်ထဲက စိုးပိုင် ၁
ရင်ထဲက စိုးပိုင် ၂
ရင်ထဲက စိုင်းထီးဆိုင် နှစ် (၁၉၉၂)
ချစ်သလား မုန်းသလား (၁၉၉၈)
မေဆွိနှင့် နှလုံးသား သံစဉ်ချိုချိုများ (2010)
May Sweetတကိုယ်တော်တေးစီးရီးများ 122 ​စီးရီး
11. ပုစွန်ဆိတ်ကလေး (၁)
12. ပုစွန်ဆိတ်ကလေး (၂)
22. လေယာဉ်ပျံ - ၂
23. ဆူး+ဆွိ ဒိုင်ယာရီ
32. နှလုံးသားထဲကစိုင်းထီးဆိုင် - ၁
33. နှလုံးသားထဲကစိုင်းထီးဆိုင် - ၂
42. ပန်းသီးသီချင်းများ - ၄
43. ပန်းသီးသီချင်းများ - ၅
44. ပန်းသီးသီချင်းများ - ၆
45. ပန်းသီးသီချင်းများ - ၇
48. ရင်ထဲကစိုင်းထီးဆိုင် - ၁
49. ရင်ထဲကစိုင်းထီးဆိုင် - ၂
50. ရင်ထဲကစိုင်းထီးဆိုင် - ၃
51. ရင်ထဲကစိုးပိုင် - ၁
52. ရင်ထဲကစိုးပိုင် - ၂
67. ချယ်ရီလွင်ပြင် - ၁
68. ချယ်ရီလွင်ပြင် - ၂
73. ပြိုင်ပွဲဝင်အမှတ် - ၁၅၀၀
80. ခုံဖိနပ်တစ်ဖက် ဘွတ်ဖိနပ်တစ်ဖက်
82. စူပါဆွိ (အချိုတကာ့အချိုဆုံးတေးများ)
87. အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးတေး - ၁
88. အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးတေး - ၂
97. ရွှေရောင်အိပ်မက်များ (Live)
98. မာယာကိုကို (Live)
99. နှလုံးသားသံစဉ်ချိုချို (Live)
111. ရင်ထဲကစိုင်းထီးဆိုင် - ၄
112. အဆိပ်တစ်စက် နှင်းတစ်စက် နှင့် ကံကောင်းသောမေဆွိ
ရွှေရုပ်ရှင်စုံတွဲ ၁ (သိန်းတန်)
ရွှေရုပ်ရှင်စုံတွဲ ၂ (သိန်းတန်)
ရွှေရုပ်ရှင်စုံတွဲ ၃ (ခင်မောင်ထူး)
မမ မောင်မောင် မိမိ (ခင်မောင်ထူး)
အကြင်နာအိပ်မက် (ထူးအိမ်သင်၊ အောင်ရင်)
ရင်ထဲက လားရှိုး (ကန့်ကော်တော မျိုးအောင်)
ရွှေမင်္ဂလာဆောင် ၁ (၁၉၉၇)
အမြတ်နိုးဆုံးနှင်း (စိုင်းထီးဆိုင်) (၁၉၉၂)
မောင်ငြိမ်းချမ်း သံသရာ (စိုးပိုင်)
ချစ်သူတို့အတွက် စုံတွဲတေး ၁ (Duets for Lovers 1)
Kyunnaw Do Ne Khit Thon Khit
May Sweet and Successful Singers 1
May Sweet and Successful Singers 2
ရင်တွင်းဆု (ဟေမာနေဝင်း၊ ni ni win shwe
အချစ်ဆုံး(ဆိုးပေ. မောင်မဲ. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
တချပ်ခုပ်(မောင်သန်းဝင်း. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
မောင်မောင်နဲ့ပထမအချစ်(ဇော်ဦး. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
မုန့်လုံးစက္ကူကပ်(ဆိုးပေ. မောင်မဲ. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
မုန်းရခက်ကြီး(ကျော်သူ. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
သုံးထောင်ပြည့်ခန်းသာလယ်မှာ(သုမောင်. ကျော်သူ. ဆွေဇင်ထိုက်. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
ချစ်နှင်းဝေဝေ(ညွန့်ဝင်း. ဆွေဇင်ထိုက်. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
တွေ့ရင်ပြောကြပါ(စိုးသူ. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
မဟူရာသေနတ်သမား(ကျော်ဇေယျ. မိုးမြင့်ရှိန်. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
နော်ကိုကိုနော်(ကျော်သူ. ခင်သီတာထွန်း. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
ပန်းရိုင်း(ရန်အောင်. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
အစကတော့မုန်းတယ်ဆို(ပြေငြိမ်း. ဇာဂနာ. ခင်သန်းနု. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
မပြောလည်းသိပါတယ်(ကျော်သူ. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
မေတ္တာရေလှိုင်း(နေအောင် . ပြေငြိမ်း. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
ပွဲတိုင်းကျော်(ရန်အောင်. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
ရတနာ(ပြေငြိမ်း. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
ကိုယ့်လူသူ့လူ(ချစ်တိုင်းအောင်. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
ခပ်စိမ်းစိမ်းနေပါ့မယ်(ရဲအောင်. မို့မို့မြင့်အောင်. မေဆွိ. သန်းသန်းစိုး) *ဇာတ်ပို့
ပျားရည်ဆမ်းသောချစ်ခရီးကြမ်း(ကျော်သူ. မေဆွိ. တင့်တင့်ထွန်း) *ဇာတ်ဆောင်
ကျော်ကြားချင်တဲ့သူ(ရဲအောင်. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
အပြန်အလှန်(မောင်သန်းဝင်း. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
နေခြည်(ကျော်သူ. မေဆွိ. စိုးမြတ်သူဇာ) *ဇာတ်ဆောင်
မရယ်ပါနဲ့လွမ်းနေတယ်(သန်းဖေလေး. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
ဗေဒါလမ်း(ညွန့်ဝင်း. ခင်သန်းနု. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
အရိုင်းချစ်(ကျော်သူ. မေဆွိ. စိုးမြတ်သူဇာ) *ဇာတ်ဆောင်
အချစ်ဆုံးသူရဲ့ရင်မှာ(ပြေငြိမ်း. မေဆွိ. ရဲအောင်) *ဇာတ်ဆောင်
ခုတော့သိပြီမင်းကိုကိုယ်ချစ်သည်(စိုးသူ. မေဆွိ. မြတ်ကေသီအောင်) *ဇာတ်ဆောင်
သမီးချွေးမသားသမက်(ကျော်ဟိန်း. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
တို့နှစ်ယောက်အချစ်တို့နားလည်(ကျော်သူ. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
ဒါလည်းခွင့်လွှတ်တယ်(ကျော်သူ. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
ငါးကြော်မကြိုက်တဲ့ကြောင်မိုက်(နေအောင်. ခင်သီတာထွန်း. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
ချစ်ပန်းသီတဲ့မိန်းကလေး(ရန်အောင်. ရန်ကျော်. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
ပန်းပေးတဲ့ကိုကို(ကျော်သူ. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
ချစ်သဲဖြူ(ကျော်ဟိန်း. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
ချစ်လွန်းကေသီ(ကျော်ဟိန်း. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
အချစ်တတ်ဆုံးလူသား(စိုးသူ. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
မွှေး(ကျော်သူ. ဇင်ဝိုင်း. မင်းဦး. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
စွန်ရဲ(ရန်အောင်. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
မုန်းပါတယ်လို့ဆိုနေမှ(ရန်အောင်. မေဆွိ) *ဇာတ်ဆောင်
ဓားတောင်ကိုကျော်၍မီးပင်လယ်ကိုဖြတ်မည်(ကျော်ဟိန်း . ကျော်သူ. နေအောင်. ချိုပြုံး.မေဆွိ. ခိုင်ခင်ဦး)
မေဆွိ ရိုက်ကူးခဲ့သောဗီဒီယိုဇာတ်ကားများ (၁၉၈၉- ၁၉၉၂)
၁. သိပ်ချစ်လို့ (ရဲအောင်. မေဆွိ)
၂. ချစ်သူသို့ရွှေနားတော်သွင်းဧချင်း (ရဲအောင်. မေဆွိ)
၃. နှလုံးသားခုံရုံး (ပြေငြိမ်း. မေဆွိ. ရဲအောင်)
၄. ဖြတ်ပိုင်းပြန်မလာ (ရဲအောင်. မေဆွိ)
၅. ချစ်သူ့စေတနာ (ရဲအောင်. မေဆွိ)
၆. ဘယ်လိုမှမေ့မရပါ (ရဲအောင်. မေဆွိ)
၇. တစ်ခါက (ရဲအောင်. မေဆွိ. စိုးမြတ်သူဇာ)
၈. အချစ်ဇာတ်လမ်းရိုးရိုးလေးတစ်ပုဒ် (ရဲအောင်. ထွန်းထွန်းနိုင်. မေဆွိ)
၉. တိမ်တောင်ညိုပြာ (ရဲအောင်. မေဆွိ. စုလှိုင်နှင်း)
၁၀. နေဝင်စားတဲ့လ (ရဲအောင်. မေဆွိ. ဇော်လင်း. ထွန်းထွန်းနိုင်)
၁၁. အချစ်နှင့်သူ၏ကိုကို (ရဲအောင်. မေဆွိ)
၁၂. ရွှေလမ်းငွေလမ်း (ပြေငြိမ်း. မေဆွိ)
၁၃. ပိုင်ချင်တယ်အချစ်ရယ် (ပြေငြိမ်း. မေဆွိ)
၁၄. အချစ်ဆုံးရဲ့အချစ် (ပြေငြိမ်း. မေဆွိ)
၁၅. မောင့်မောင့်အချစ် ( ကျော်သူ. မေဆွိ)
၁၆. ဇာတ်လမ်းမှတ်တမ်းမဟုတ်ပါ (ကျော်သူ. မေဆွိ)
၁၇. အရူးကတမူးသာ (ကျော်သူ. မေဆွိ)
၁၈. အချစ်ကြီးချစ်ရသူ (ရန်အောင်. မေဆွိ)
၁၉. မပြာမှီကညို (ရန်အောင်. မေဆွိ)
၂၀. ဖိုးသကြားနှင့်မသင်္ကြန် (ရန်အောင်. မေဆွိ)
၂၁. လူသစ်စိတ်သစ် (ရဲကိုကို. မေဆွိ)
၂၂. မိုက်ရဲမှမိုက် (ရဲကိုကို. မေဆွိ)
၂၃. ထာဝရသစ္စာရှင်၁+၂ (နေအောင်. ရဲကိုကို. ချိုပြုံး. မေဆွိ)
၂၄. အခါးကြိုက်တဲ့ပျားမိုက် (ကျော်ရဲအောင်. မေဆွိ)
၂၅. နှင်းဆီနှင့်အိပ်စက်ခြင်း (ဇင်ဝိုင်း. မေဆွိ)
၂၆. မြီးကောင်ပေါက် (မောင်သန်းဝင်း. မေဆွိ)
၂၇. ပစ္စုပ္ပန်လူသား (ဇော်ဒိန်. မေဆွိ)
၂၈. မိုးညအိပ်မက်မြူ (သိန်းဇော်. မေဆွိ. မေသန်းနု. မျိုးသန္တာထွန်း)
၂၉. ဘဝအလှဆည်းဆာ (သီဟတင်စိုး. မေဆွိ)
၃၀. ဆှိမတ်ေတာ (မဆှေိ. မတ်ေတာ)
၃၁. မယားကြီးနာမည်မအေးပွင့် (ညွန့်ဝင်း. မေဆွိ)
၃၂. အပွင့်ရယ်စုံတစ်ငုံကျန်သေးတယ် (လွင်မိုး. မေဆွိ)
၃၃. နေရိပ် (ကျော်သက်. မေဆွိ)
၃၄. အချစ်ညရင်ခုန်သံ (နေအောင်. မေဝင်းမောင်. မေဆွိ)
၃၅. ကိုကိုနှင့်မငြိမ်းချမ်း (ထူးအောင်. မေဆွိ)
၃၆. သဲလည်းသဲတဲ့မသဲပို (ကိုကိုလင်းမောင်. မေဆွိ)
မြင့်မြင့်ခင် ကိုင်ဇာ အနမ်းပန်း
↑ May Sweet Discography (in Japanese)။ 2010-04-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မေဆွိ&oldid=703820" မှ ရယူရန်
၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။